VEVO inta badan waa website a music video wada jir ah ula saddex ka mid ah "waa weyn afar" shirkadaha waaweyn music shaqeeya. Waxaad ku raaxaysan karaan daawashada tan ah videos music on VEVO. Laakiin mararka qaarkood, waxaad ka heli kartaa video aad jeceshahay oo rabto in aad u soo dejisan si uu u daawado offline. Si aad uga xun yahay, ma waxaad si fudud u soo bixi karo, iskaba daa ciyaari video VEVO via TV Apple. Halkan waa barnaamij weyn oo heli karaa dhibaatooyinka oo aad u fudud in la soo dejisan iyo sidoo kale loogu badalo videos music VEVO si TV Apple qaab saaxiibtinimo. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) lagu ogaan karaa videos ciyaaro si toos ah. Waxaa kaliya uu u baahan yahay hal click inaad kala soo baxdo iyo badalo videos ah. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Bal aan fiirino dhow sida loo isticmaalo barnaamijka iyo aad u hesho videos music ee faraha aad.
1 Download VEVO videos
Ka diyaariyeen rakibidda barnaamijka on your computer oo la furo. Waxaan doonaa qaadan version daaqadaha tusaale ah. Markaasay aad shabakadda internetka VEVO si aad u hesho jecel aad music video. Fur video ay ku ciyaaraan. Inta aad ku raaxeeysanayaan codka u qurux badan, ha ka maqnaanina sabayn button Download ku-midigta sare ee shaashadda video ah. Riix badhanka si ay u bilaabaan soo degsado.
Fiiro gaar ah: Waxaad si aad u hubiso in aad abuurtaan mid ka mid ah saddex daalacashada (IE, Firefox, Chrome) si ay u helaan website VEVO, haddii aan, button Download ma u muuqan karto.
Oo weliba waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa videos si fudud ay kaga dayanayaan ay url iyo Jinka button URL guji oo dhan waxaa lagu sameeyaa.
2 Beddelaan VEVO si Apple TV qaab saaxiibtinimo
Ka dib dajinta, fadlan aad u ogaato VEVO videos ee qaybta soo bixi. Halkan waxa aad ka arki kartaa macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan videos sida size, format iyo xallinta. Riix badhanka badalo ku yaal dhinaca midig oo dooro TV Apple sida qaab wax soo saarka.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad kala soo bixi oo aanay waqti isku mid ah. Fadlan u tag interface barnaamijka, qaybta duuban la xusho oo waxaad arki doontaa Download tab ah ka dibna Beddelaan on xaq. Waxa ku noqda oo Device> Apple> Apple TV sidii qaab wax soo saarka. Markaasuu wakhtiga soo socda, marka aad ka soo dejisan video kale VEVO, waxa uu isku badali doono in qaab Apple TV si toos ah.
3 Watch VEVO video Via TV Apple
Ka dib si degdeg ah wuu soo celiyaa, xaq guji video ee qaybta diinta fur Folder ee la gediyay, ka dibna aad gacanta ku wareejin karaa video inuu soo jeedo ee shaashadda TV weyn via TV Apple.
Hadda, shaqadaada loo qabto oo aad u qalmo inuu ku leeyihiin koob bun ah oo fadhiisan ka hor inta TV in ay ku raaxaystaan ​​video ah. Haddii aad rabto in aad ka ciyaaro aaladaha kale ee la qaadi karo, waxa kale oo aad kala socon kartaa tallaabooyinka iyo doorato qalabka kale ee la qaadi karo sida qaab wax soo saarka.
> Resource > Apps > Sida loo Download VEVO si TV Apple